Uru nke ifufe | Netwọk Mgbasa Ozi
Uru nke ifufe
Agbanyeghị na anaghị ekwukarị ọtụtụ ihe banyere ya, ajọ ifufe Ha bụ ihe omimi nke ihu igwe na, n'eziokwu, nwere ihu abụọ: nke na-egosi ike mbibi ya, na nke ọzọ, nke anyị na-adịghị elebara anya nke ukwuu, nke bụ nke na-egosi anyị akụkụ dị ụtọ karị nke ajọ ifufe a. N'ezie, n'ihi ihe ịtụnanya ndị a, mmiri nwere ike iru ebe oke mmiri ozuzo dị ụkọ, dịka North Carolina (United States).
Choputa kedu uru nke ifufe.
1 Ajọ Ifufe na-ebugharị ọtụtụ mmiri
2 Ha na-achịkwa ọnọdụ okpomọkụ
3 Ha na-enye aka ilekọta oke ọhịa na oke ohia nke ebe okpomọkụ
4 Hapụ okpomọkụ
Ajọ Ifufe na-ebugharị ọtụtụ mmiri
Ọ bụghị naanị na ha na-eweta mmiri ozuzo, kamakwa ifufe siri ike iji bulie mmiri ahụ site n'otu ebe ruo ebe ọzọ. N'ime ime nke a, mmiri mmiri dị oké ọnụ ahịa nwere ike iru ebe enwere ụkọ, mpo na ɔbarima a odi n’akyi no sua.
Ha na-achịkwa ọnọdụ okpomọkụ
Ha na-eme ka ọnọdụ okpomọkụ dị jụụ site na akara kere ụwa ruo na okporo osisi (ma South ma Rịba ama), yabụ na ha bụ ndị na-achịkwa ihu igwe. Ọzọkwa, eme ka ị belata okpomọkụ na ebe okpomọkụ nke ga - adi elu.
Ha na-enye aka ilekọta oke ọhịa na oke ohia nke ebe okpomọkụ
Ma ọ bụ na osisi ndị a chọrọ akwa iru mmiri dị ukwuu na oke mmiri ozuzo iji nọgide na-eto. Yabụ, ajọ ifufe na-enyere aka igbochi oke mmiri ozuzo na ebe okpomọkụ, jupụtara na ndụ.
Ikwesiri iburu n'uche nke ahụ ifufe na-akụda ndị na-arịa ọrịa ma ọ bụ osisi ochie, na-enye ndị ọzọ ohere ịnọchi ha.
Oké ifufe sitere n'oké osimiri nke ebe okpomọkụ, nke okpomọkụ ya dị elu (gburugburu 20-22ºC). Mgbe ikuku ikuku dị ala, osimiri ahụ na-ekpo ọkụ na-ewepụta uzuoku n’ime ikuku akpụ ihe mmegharị na-agbagharị n'oge na-adịghị anya.
Enwere ike ilele oke ifufe site na uzo abuo di iche. Ma, n'agbanyeghị nke ahụ, a ghaghị ile ha anya ka ha nwere ike imebi nnukwu ihe.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Ajọ Ifufe » Uru nke ifufe
Ihe kpatara na enweghi oke ifufe na Spain
Ihe ndekọ 5 nke Hurricane Matthew depụtara